Wednesday January 02, 2019 - 09:54:53 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Jawaab celinno kala duwan ayaa laga bixiyay qoraal xalay kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Dowladda Federaalka oo lagu sheegay in wakiilka Q.Midoobe uusan ka shaqeyn karin Soomaaliya.
Khilaaf ayaa soo kala dhaxgalay dowladda Farmaajo iyo ninka lagu magacaabo Nicholas Haysom oo dhalasha ahaan kasoo jeedo wadanka Koonfur Afrika balse heysta dhalashada dowladda Ingiriiska.
Aqoonyahanka Max'med Suldaan Garyare oo aad ula socda xarig jiidka siyaasadda Soomaaliya ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid aan socan doonin isagoo sabab kaga dhigay in dowladda Federaalka ay tahay mid laheysto oo ay taliyaan Q.Midoobe iyo Ururka Midowga Yurub.
MAXAY KA NUUGTAA AMASE KU NUUGTAA?.
Hadda ka hor ayaa Dhurwaa ka cowday magaca Dhurwaa waxa uuna habar dugaag ka codsaday in laga beddelo magaca Dhurwaa, looguna yeero maanta wixii ka dambeeya Aamin. Habar dugaag waxa ay Dhurwaa u sheegtay in magaca cusub ee uu dalbaday loogu wanqali doono haddii uu fuliyo shuruudaha laga doonayo. Waxa loo keenay hal iyo Nirig, waxaana lagu wargeliyey in uu caawa hashaas lamaalo berrina magacii cusbaa loogu wanqalo.
Waa dhurwaayoo illeyn aamin maleha'e habeenkii ayuu is yiri hasha iyo Nirigta ma cuni kartide ka gooso xubno aan la dareemi karin. Waxa uu Nirigtii ka goostay furuuryihii, hashiina afartii naas ayuu ka goostay. Subixii la ballansanaa ayaa habar dugaag ugu timi Dhurwaagii oo hashii iyo Nirigtiiba haya.
balse ma aysan dareemin xubanaha ka maqan hasha iyo Nirigta. Waxa la yiri Aaminoow hasha noo soo godol oo caano noogasoo lis. Dhurwaa ayaa ku jawaabay "maxay ka nuugtaa maxase ku nuugtaa", illeyn waa hal naasa la' iyo Nirig aan faruuryo lahayne.
Haddaba qolada shalay warqadda iska qortay ee tiri waxa aannu cayrinay ninkii iyaga madaxda u ahaa ee ah gaalka Hayson ee kusoo barbaaray dhaqanka midab-takoorka ah (apartheid), Soomaaliyana loo keenay in uu dhaqan xumadii uu dalkiisa kala yimid ka hirgeliyo, ayaa waxa ay u egtahay Dhurwaagii hasha iyo Nirigta looga tegay. Su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah horta marka laga reebo in ay warqad xariiqeen ma awoodaan in ay dalka ka saaraan ama ka bax yiraahdaan sayidkooda?.
W/Q Sudaan Garyare.